“Hal shillin oo aan bixinaynaa ma jirto” – Waxaa sidaas sheegtay kooxda Cardiff kaddib Geeridii ku timid Emiliano Sala – Gool FM
“Hal shillin oo aan bixinaynaa ma jirto” – Waxaa sidaas sheegtay kooxda Cardiff kaddib Geeridii ku timid Emiliano Sala
(Cardiff) 16 Abriil 2019. Weli waxaa taagan is mari waa u dhexeeya kooxaha Nantes iyo Cardiff City ee ka kala dhisan Waddamada Faransiiska iyo Ingiriiska taasoo ku saabsan heshiiskii dhicisoobay ee ay Cardiff ku iibsatay Weeraryahan Emiliano Sala, hase yeeshee isagoo kooxdiisa cusub u sii socda ay diyaarad la dhacday oo uu halkaa ku geeriyooday.
Nantes ayaa dalbatay in la siiyo lacagtii heshiiskaasi oo gaaraysay 15 Milyan oo giniga Istarliinka ah iyo abaal-gudyo kale oo dheeraad ah, halka Cardiff-na ay arrintaasi ka biyo diidday.
Cardiff City waxay sheegtay in aysan wax warqado dukumiinti ah ka hor marsan ciyaaryahan Sala, sidaa darteedna aysan kala saxiixan wax heshiis rasmi ah, waxaana ay intaa ku dartay in ay warbixin u gudbin doonto xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA.
Bishii January ee sanadkan ayaa Sala oo reer Argentina ahaa ay diyaarad yar oo uu saarnaa kula dhacday Biyaha Kanaalka Ingiriiska ee u dhexeeya Faransiiska iyo Britain, waxaana halkaa ku geeriyooday Sala oo 28 jir ahaa iyo duuliyihii diyaaradda ku waday.
Shirkadda qaabilsan heshiisyada ee Cardiff ayaa war cad oo ka soo baxay waxay ku yiraahdeen: “Hal shillin oo aan bixinaynaa ma jirto”.
Baaritaan dheer oo bartii ay diyaaraddu ku dhacday laga sameeyay ayaa waxaa aakhirkii lagu soo saaray haraadiga diyaaraddii biyaha ku dhacday iyo meydkii ciyaaryahan Sala, inkastoo la waayay meydka duuliyihii diyaaradda.
RASMI: Weeraryahan Mario Balotelli oo ku guuleystay abaal-marinta laacibka…